ह्वात्तै बढ्यो सबै विदेशी मुद्राको भाउ, हेर्नुहोस् कुन देशको कति पुग्यो ? - संदेश पत्र
४४५५ पटक पढिएको
ह्वात्तै बढ्यो सबै विदेशी मुद्राको भाउ, हेर्नुहोस् कुन देशको कति पुग्यो ?
२०७७ अषाढ ११, बिहिबार (१ महिना अघि)
काठमाडौ, असार ११-आज नेपाली बजारमा बिहिबार अमेरिकी डलरसहित प्राय सबै विदेशी मुद्राको भाउ बढेको छ । आज यूरोपियन यूरो एकको खरिददर १३६ रुपैयाँ ५२ पैसा तथा बिक्रिदर १ सय ३७ रुपैयाँ २० पैसा रहेको भने आज युएई दिराम एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ९० पैसा छ भने बिक्रिदर ३३ रुपैयाँ ६ पैसा रहेको छ।
त्यस्तैगरी आज साउदी रियाल एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ २२ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ३८ पैसा रहेको भने आज बिहिबार कुवेती दिनार एकको खरिददर ३९२ रुपैयाँ ७६ पैसा तथा बिक्रिदर ३९४ रुपैयाँ ७१ पैसा रहेको छ। त्यस्तै आज आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १२० रुपैयाँ ८५ पैसा रहेको छ ।
भने आज असार ११ गते कतारी रियाल एकको खरिददर ३३ रुपैयाँ १९ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३३ रुपैयाँ ३६ रहेको बहराईन दिनार एकको खरिददर ३२० रुपैयाँ ५ पैसा तथा बिक्रिदर ३२१ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ। भने आज युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रिदर १ सय ५२ रुपैयाँ १ पैसा रहेको छ। त्यस्तैगरी आज मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २८ रुपैयाँ २९ पैसा तथा बिक्रिदर २८ रुपैयाँ ४३ पैसा रहेको छ।
बढ्यो विदेशीको मुद्रा भाउ : हेर्नुहोस् कुन देशको कति छ ।
खुसीको खबर हवाइ भाडा यति धेरैले घट्यो